Ny Volon’ny Loutre An-dranomasina | Nisy Namorona Ve?
VOARO amin’ny hatsiaka ireo biby mampinono mivelona any anaty ranomasina mangatsiaka be. Matevina be mantsy ny tavy ao ambany hodiny. Hafa mihitsy anefa ny loutre an-dranomasina. Tsy tavy no miaro azy fa ny volony!
Diniho izao: Matevina kokoa noho ny an’ny biby mampinono hafa ny volon’ny loutre an-dranomasina. Miisa 155 000 eo ho eo isaky ny iray santimetatra toradroa mantsy ny volony. Mitahiry rivotra ny volony rehefa milomano izy. Iny rivotra iny no misakana an’ilay rano mangatsiaka tsy ho tody any amin’ny hodiny. Tsy mihena mihitsy àry ny hafanan’ny vatany.
Te hiana-javatra avy amin’izany ny mpahay siansa. Nanamboatra lamba volomboloina isan-karazany izy ireo, ka novaovany ny halavan’ireo volo sy ny hateviny. Hitan’izy ireo hoe “tsy tantera-drano na maina kokoa ilay lamba volomboloina, rehefa lava sy matevina kokoa ireo volo.” Mbola miavaka anefa ny volon’ny loutre an-dranomasina!
Mino ny mpikaroka fa ho afaka hamorona karazan-damba vaovao tsy tantera-drano izy ireo. Asa aloha raha hety amin’ireo mpanao antsitrika any amin’ny ranomasina mangatsiaka ny manao fitafiana volomboloina toy ny an’ny loutre!
Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona ve ny volon’ny loutre an-dranomasina sa nisy namorona?
Hizara Hizara Ny Volon’ny Loutre An-dranomasina